Siyaasa Itoophiyaa: Waa'ee paartii siyaasaa Itoophiyaa 108ffaa... - BBC News Afaan Oromoo
Siyaasa Itoophiyaa: Waa'ee paartii siyaasaa Itoophiyaa 108ffaa...
Image copyright Paartii Bilisummaa fi Wal-qixxummaa
Lakkoofsi paartilee siyaasaa Itoophiyaa baay'ataniiru osoo jedhamaa jiru paartiin haaraan 108ffaan kan biraa tokko hundeeffameera.
Paartii Bilisummaa fi Wal-qixxummaa ykn 'Natsaanat innaa Ikulinat' jedhama.
Maaliif amma hundeeffamuu barbaachisee jechuun BBC'n oggantuuu haariiroo hawaasaa paartichaa Addee Nabiyaat Mohaammad dubbiseera.
Filannoo dhufu irratti hirmaachuun ni ijjifannaa abdii jedhu akka qaban dubbatu.
''Sabni dinagdeen hin cimne bilisummaa qaba jennee hin yaadnu''
'Balichi qormaata guddaa ture, garuu irra aanne'
Saannateen ji'a tokko keessatti yeroo lamaffaaf gubachaa jiru
Bilisummaa, haqaa fi fayyadamummaa wal-qixxummaa irratti deebii quubsaa kennuuf dhaabbanni siyaasaa biyyaaleessaa jira jennee waan hin amanneef kanaaf deebii kennuuf dhaabbata kana hundeessuun nu barbaachise jedhu.
Dhimmoonni kunneen hundinuu kan paartileen siyaasaa biroo ni qabsoofnaaf jedhaniidha. Paartiin keessan waan addaa maal fidee dhufee jenneen.
''Kan paartilee hundaa isaanii yoo ilaalle, naannoo wayiitti kan murtaa'ee, ykn magaalaa fa'i qofarratti kan daanga'ee ykn saba filatanii dhaabbattaniif tokko qofaaf deebii kennuuf kan ijaaramaniidha'' jedhu.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad paartileen siyaasaa jiran walitti makamuun cimanii paartii biyya bulchuun dorgomu akka dhaaban waamicha dhiyeessanii turan.
Aadde Nabiyaat kan MM jedhan irratti dabalata hundeessaa hin jirru jedhu.
"Hundeeffama paartii kanaatu amma ta'e malee, paartiilee siyaasaa kana dura galamaa'an 107 keessaa 99ffaa irratti galamoofne" jechuun dubbatu.
Rakkoolee wayita ammaa biyyattii mudatan furuuf tumsa lammilee hundaa barbaada kan jedhan Aadde Nabiyaat, qoodni paartileen siyaasaa bahan olaanaa ta'uu dubbatu.
Dhuguma rakkoon biyya kanaa rakkoo hanqina paartiiti, isin paartii kana dhaabuun rakkinicha ni furaa jennees gaafanneerra.
Paartiin siyaasaa baay'ateefi xiqqaateef osoo hin taane hojii isaan hojjetantu murteessaadhas jedhu. Paartileen kanaan dura turan lammilee biyyattii naannolee hunda keessa jiran qixa hin fayyadne, kanaaf paartii kana dhaabuun barbaachisaa ta'uu himu.
Paartiin isaanii yaada siyaasaa 'Konservaatiiv Libaraaliizim' akka hordofu kan himan Aadde Nabiyaat "maqaadhumaaf qofa miti kan hundoofne" jedhu.
Paarticha hundeessuuf sagalee namoota 2500 ta'anii naannoolee biyyattii hunda irraa walitti qabu akka danda'anis himu.
Akkasumas namoonni paartii kanaaf mallattoosaanii kennan hundinu baay'ee gammadoo ta'u isaaniilleen Aaddee Nabiyaati dabaluun himaniiru.
Ibidda gaara Saannatee: "Humna namaa gahaa osoo qabnuu ibiddicha dhaamsuu hin dandeenye"
25 Bitooteessa 2019
'Balichi qormaata guddaa ture, garuu irra aanne' H/G/O Daandi qilleensaa Itoophiyaa Tewelde Gabramaariyaam
Waldhibdee Mo Faaraah fi Haayilee Gabrasillaasee
'Mootummaan seeraan ala gumii keenya diige' - Bayyanaa Sambatuu
Hojiif biyya alaa deemuuf qabxiilee baruu qabdan
Carraafi yaaddoo 'Belt and Road Initiative'
Bubbeen rooba makate 'Kenneth' Afrikaa Bahaaf sodaa uumeera
Bu'aan 'Boeing' dhibbeentaa 20'n hir'ate
Mana barumsaa si'a kudhanii ol jigee ijaarame
'Kirkirri lafaa Maarsii irras jira'
Milishaa Ameerikaa 'Obaamaa ajjeesuuf' leenji'e'